NAB Show New York: FOR-A si loo iftiimiyo ugu dambeeyay ee Production Live | NAB Show News | 2020 NAB Show Media Partner iyo Soosaaraha NAB Show LIVE. Wararka Injineerka Warbaahinta
Bogga ugu weyn » News » NAB Show New York: FOR-A si loo iftiimiyo ugu dambeeyay Production Live
NAB Show New York: FOR-A si loo iftiimiyo ugu dambeeyay Production Live
Cypress, CA, Oktoobar 8, 2019 - FOR-A waxay soo bandhigi doontaa diiradeeda ku saabsan is-dhexgalka badeecada oo dhameystiran oo ay kujirto soo-saareyaal baaxad leh baayacmushtariyaasheeda, encoder / decoders, badalayaasha wax soo saarka muuqaalka, adeegayaasha fiidiyowga, iyo nidaamyada sawirada ee qolka shirkaddu ku taal NAB Show New York. FOR-AExhib wuxuu ku soo bandhigi doonaa Booth N530 inta lagu gudajiro bandhiga oo soconaya Oktoobar 16-17 ee Javits Xarunta New York City.
FOR-A's NAB New York booth lineup waxaa ka mid ah qalabka loo yaqaan 'FA-9600' processor processor-ka ujeedada badan, IP-HE950 encoder / decoder, HVS-490 HANABI switcher, Variant Systems Group's Envivo Studio Production suite iyo Envivo Replay isboorti iyo xallinta dhacdooyinka jilista nool, Nooca ClassX ee abuurista iyo xalka jaangooyada sawirada, CG-Portable curdinka dabeecadda is haysta, iyo serverka fiidiyowga ee ODYSSEY Insight.
Marka laga soo tago muuqaalkeeda NAB New York, FA-9600 processor-ka calaamadaha badan leh waxaa lagu soo bandhigayaa munaasabado kale oo heer sare ah, oo ay kujiraan Oktoobar '2019 dhacdo rugby adduunka, ciyaaraha 2020 Tokyo xagaaga, iyo bilowga horyaalada kubbadda cagta xirfadeed ee cusub ee Yurub. Muuqaalka processor-ka laba-jeer ee loo yaqaan 'FOR-A FA-9600' wuxuu helayaa fiiro gaar ah kuwa ka dhageysta wargeysyada bilowga ah ee raadinaya tayada ugu sareysa, tikniyoolajiyadda beddelka muuqaalka dhacdooyinkaan sharafta leh.
Fujitsu's IP-HE950 waqtiga dhabta ah ee H.265 / HEVC codbixiyeyaasha / decoder shaqaaleysiiya aaladaha cadaadiska ugu dambeeyay iyo algorithm-ka sameynta sawirka si loo muujiyo aaminaad fiidiyaha heer-fasalka ah. IP-HE950 wuxuu taageeraa waqtiga-dhabta ah ee 4K tabaruca, iyo sidoo kale SD iyo HD. IP-HE950 waxay adeegsaneysaa tikniyoolajiyadda cusub ee loo yaqaan 'H.265 / HEVC', oo bixin kara laba jeer isugeynta saamiga ee tikniyoolajiyadda H.264 / AVC. FOR-A waa qeybiyaha khariidadeynta waxqabadka sare ee Fujitsu iyo qodayaasha Waqooyiga Ameerika, Yurub, Bariga Dhexe iyo Afrika, iyo sidoo kale xulashada gobollada Latin America.
HANABI HVS-490 isweydaarsiga ayaa albaabka u furaya waxsoosaarka 4K ee la awoodi karo. HDMI Taageerada tilmaanta 2.0b waxay bixisaa soosaarka 4K ee muuqaal-badan. Iyadoo la siinayo astaamo gaar ah, oo ay ku jiraan tikniyoolajiyadda MELite ™, oo fidiya xawaaraha '2 M / Es' si loo soo bandhigo waxqabadka 6 M / E, HVS-490 waxaa loogu talagalay in lagu isticmaalo deegaan kasta oo nool, oo ay ku jiraan duubabka wareega, dhacdooyinka, iyo wax soosaarka shirkadaha gudaha ah . Wareeggu wuxuu siiyaa dadka isticmaala xusuusta dhacdada iyo waxqabadka macro, iyo sidoo kale iskudhafyada qaab-dhismeedka isku dhafan iyo daawadayaasha badan.
Kaliya waxaa lagu soo bandhigay NAB 2019 bishii Abriil, Nidaamyada kala duwan ayaa soo bandhigi doona kan cusub Envivo Studio in ka soo qeyb galayaasha NAB New York. Envivo Studio waa nidaam wax soo saar oo dhan-ka-mid ah oo ay kujirto xidid muuqaal ah, wali bakhaarka, sanduuqa toogashada, wareejinta tooska ah, keyer gudaha, aaladda dib u eegista tababbarka iyo awoodaha awooda leh oo ay ku jiraan xakameynta VDCP, 24hr gelinta loop-ka loop-ka, iyo gaabinta dib-u-celinta mooshinka.
Envivo Replay wuxuu bixiyaa xalka dib u soo celinta oo dhameystiran oo kuxiran xariif adeegsi dareen leh oo leh awoodo badan oo duubis kanaalka ah, kaydinta isku duuban ee xaglo badan si looxyo biilasha, liistooyinka muraayadaha dib udhiska, awoodaha sumadaha ee kudhagan, daabacaada tooska ah baraha warbaahinta bulshada, iyo taakuleynta kamaradaha xawaaraha sare ee xawaaraha sare. Ugu NAB Show New York, labada nidaam Envivo waxaa lagu soo bandhigi doonaa muuqaal maqal ah oo Dante ah, oo awood u siineysa nidaamyada lagu taageerayo isku-darka aan dhameystirneyn, kanaalka badan, maqalka dhijitaalkiisu hooseeyo ee shabakadda Ethernet-ka caadiga ah. Studio iyo Replay sidoo kale waxay taageerayaan NDI (Shabakada Qalabka Interface), borotokoolka bilaashka ah ee Video-over-IP.
Muuqaal muujinaya xalka ugu dambeeyay ee ClassX ee 2D / 3D jiilka dabeecada ah iyo sawirada dhaqdhaqaaqa nool iyo soodejinta kumbuyuutar ee lagu dhejiyay FOR-A beddelka fiidiyowga ayaa ku jiri doona booska FOR-A. Naqshadeynta naqshadaha 'ClassX' ee xalka ayaa caan ku ah jaamacadaha, saxeex dijitaal ah, munaasabad nool, iyo dalabyo soosaar isboorti. FOR-A waa qaybiyaha keli ah ee ClassX ee Waqooyiga, Bartamaha iyo Koonfurta Ameerika. Heshiisku wuxuu siinayaa wariyaasha iyo soosaarayaasha dhacdooyinka nool awood ay ku abuuraan ugana ciyaaraan garaafyada casriga ah ee waqtiga firaaqada casriga ah ee lagu daro FOR-A switchers video.
Kombuyuutareedka jaban iyo qiimaha jaban ee CG-Portable ee leh barnaamijka Brainstorm ayaa la soo bandhigi doonaa markii ugu horreysay ee Mareykanka inta lagu gudajiro NAB New York. Cutubku wuxuu bixiyaa tiro balaadhan oo ah qoraalka iyo shaqooyinka jaantuska ah, oo ay kujiraan laba qoraal oo madaxbanaan, isugeyn muuqaal ah iyo galinta astaan ​​firfircoon, jaangooyo saacad leh tirinta kor / hoos, iyo buuxi / keydin isku dhaf ah oo ku saabsan fiidiyowga tooska ama muuqaallo la soo dhejiyay. Iyada oo leh astaamo hodan ah oo go'an at qiimo jaban oo la awoodi karo, cutubkani wuxuu kufiican yahay barnaamijyo kala duwan oo CG ah.
Fahamka ODYSSEY Server Production waa nidaam ciyaaro badan oo kanaal ah, oo laga heli karo qaabeynta laba ama afar-kanaal. Bixinta websaydhka xakamaynta qalab kasta oo leh biraawsar webka (looma baahna rakibid), fiidiyowga fiidiyowga wuxuu bixiyaa xirmooyin ballaadhan oo la taageeray iyo koodhadh loogu talagalay ku-biirinta warbaahinta iyo fiidiyowga lagu ciyaaro dib-u-dhaca waqtiga.
FOR-A, caalamka oo dhan, soo saaraha warshadaha-horseedka ah, waxay bixisaa tiro balaadhan oo ah warbaahin iyo wax soo saarka alaabta iyada oo diiradda la on teknoolajiyada jarida-ku laayeen, oo ay ku jiraan: HD, 4K iyo waxyaabaha IP. FOR-A sii wadaan in ay bixiyaan mustaqbalka-diyaar, kharashka ku ool ah, xal technology sare. Products ka mid ah: switchers video, switchers isdaba, multi-daawadayaasha, 4K buuxa kaamiro oo xawaare sare, encoders IP / gartaan qalabka, Processor signal multi-channel, 8K / 4K /HD matoorrada imtixaanka signal, correctors midabka, synchronizers jir, wax soo saarka file-ku-saleysan, matoorrada qof, server video iyo wax ka badan.
Waayo, kala duwan oo ay ka buuxaan HD Iyo 4K soo saarka iyo xalka wax soo saarka, iyo sidoo kale waxyaabaha ku saleysan IP, booqo boggayaga internetka www.for-a.com.
LACAG-LA'AANTA AMERICA, 11155 Knott Ave., Suite G&H, Cypress, CA 90630 Telefoon: 714-894-3311, Fakis 714-894-5399 Websaydhka: www.for-a.com
2016 NAB Show 2016 NAB Show Job Fair 2016 NAB Show News Broadcast Awards Beat Broadcast Beat Magazine Broadcast Engineer Broadcast Engineering Idaacadan Convention Broadcasting Convention Deji FOR-A isovideo, viarte, HDR, dhimista buuqa, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC, 2015, hoos bitrate, immersive, UHD / 4K / HD, H264 / H265, Warsaw wax soo saarka live NAB 2015 NAB 2016 NAB New York NAB16 nabshow xafiisyo fiidiyow ah video switcher 2019-10-09
Previous: Shakhsiyaadka & Macluumaadka: Eran Stern
Next: NAB NY 2019: TVU Networks 'Cloud-based TVU Talkshow iyo AI-based TVU MediaMind Waxay Albaabada u Fureysaa Soosaarid Dheeraad ah oo Fidsan iyo Waxgal Ah